Madaxweyne Jubbaland oo Nairobi kula kulmay Safiirka Sweden – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweyne Jubbaland oo Nairobi kula kulmay Safiirka Sweden
Tuuryare 16 April 2019
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya kulan kula qaatey safiirka Dowlada Sweden u fadhiya Soomaaliya Andreas von Uexküll .
Kulankan oo ahaa mid miro dhal ah ayaa diirada lagu saarey Doorashada soo socota ee Jubbaland , Arrimaha Amniga iyo xiriirka ka dhexeeya Dowlada federaalka Soomaaliya iyo Dowlad goboleedyada .
Doorashada Jubbaland ayaa la isku afgartey inay u dhacdo si xor iyo xalaal ah iyada oo laga digtoonaanayo wax faragalin ah dhinac kastaba haka imaatee.
Sidoo kale arrimaha amniga ayuu madaxweyanaha Jubbaland sheegey inay muhiim tahay in la fuliyo heshiisyadii Amniga si looga adkaado Al-Shabaab una sahlanaato daadejinta nidaamka dowladnimo ee ilaa heer tuulo.
Somali Journalist Mourns the Death of Veteran Somali Journalist in Kenya.